NATHI crushing ukuvuthuzela: Putin ke iintombi kuphulukana nayo ilifa, ruble collapses - Zonke Russian abaqondisi-mthetho ingaba apha! Oyena isemthethweni portal.
NATHI crushing ukuvuthuzela: Putin ke iintombi kuphulukana nayo ilifa, ruble collapses
Akuyi kufuneka ufake isicelo hayi nkqo, kodwa tye drilling
NATHI esenethi ezilungiselelwe ezimbini eyilwayo kanye nge entsha sanctions ngokuchasene SaserashiyaRussians ingaba ke kohlwaya kuba aggression kwi-i-ukrainian territory kwaye kokuphazamiseka kwi-unyulo e-United States. Yintoni enika umdla, kwakamsinyane nje uxwebhu waba"eziboniswe"(kwaba? yokugqibela ehlotyeni), ruble exchange umyinge collapsed, isirussian isitokhwe _sinyusiwe: wawa kwi-kwexabiso. Kwaye nangona kunjalo ukuba uxwebhu ngokwayo waba zange olwamkelekileyo. Kulo nyaka,"sanctions esihogweni"zithe finalized kwaye ngoku baya kuba wonke ithuba angene umkhosi.
Efakwa ebhankini kwi-Western Siberia ingaba exhausted
Ukongeza, ubukrelekrele kufuneka siqwalaselwe oluneenkcukacha ingxelo kwi"Vladimir Putin ke personal ezilinganayo kwaye impahla yexabiso, kubandakanywa uvavanyo lokuba Vladimir Putin ke nosapho lwakhe ngu umthombo wengeniso, kuquka impahla yexabiso, utyalo mali, ii-akhawunti yebhanki, kwaye ishishini izinto ezichaphazelaukongeza Moscow ke cacisa kokuphazamiseka wethu konyulo, abameli Zokulungiselela ka-nkqo ekukhuseleni ilungelo kanjalo ingxelo ukuba Kremlin balingwe ukuba hack zethu unyulo kwi- lonyaka"watsho cinezela ukhupho esikhutshwe Republican Marco Rubio kwaye Democrat Chris Van Hollen. Baya kwaphuhliswa lo mthetho usayilwayo."Ukususela kuphela into Vladimir Putin ikuqonda ngu deterrence, umthetho ngokucacileyo lenza cacisa ukuba Us nezinye hostile oorhulumente ukuba i-United States iza ngokukhawuleza kwaye baninzi uninzi iimeko siphendule elizayo azame intervene okanye undermine zethu unyulo"watsho Yeengwevu Rubio. Ngaphezulu, noba imveliso imiqulu iya kuba sharply ukuphumela, okanye ngaphezulu complex imihlaba kufuneka kuqulunqwa.
Ukongeza, amanzi kufuneka kusetyenziswa ukwakha koxinzelelo, kwaye iziqhushumbisi kufuneka kusetyenziswa ukugcwalisa idama i-ukhuselo.
Kodwa Us akanalo i ubugcisa ukuba ziyafuneka kuba abanjalo drilling. Yena ayikwazi ukuthenga imimandla nezixhobo zokusebenza ukusuka Kwintshona amazwe. Ukuba akunjalo kuba sanctions. Kwaye ukuba akukho nto itshintshile, ngoko ke ngu ye-RF, - oli imveliso ayikwazi kuphulukana nayo, intloko Rosgeology, Roman Panov, wathi ngomhla"Geological exploration-"foram.
Kwaye enze phezulu kuba ilahleko, sidinga obutsha.
'Ngoku ruble ikhangeleka kuba ehleli kwi ngumgubo keg, nto leyo capable ka-jerking nangaliphi na kanye,' utshilo Alexander Kuptschievich, i-analyst e FxPro.
Large iibhanki ingaba sele ilungiselela kuba kunokwenzeka devaluation - lento evidenced yi-zabo ukuziphatha ngendlela imali yentengiso, Denif Poryvai, i-analyst e Raiffeisenbank, amanqaku ngaphandle.
Ewonke,"restrictive amanyathelo"ngokuchasene Us baba ungeniswa yi- amazwe ehlabathini, kuquka i-EU, Ukraine kunye ne-USA. Ngokunxulumene ingxelo Zokulungiselela Kwezoqoqosho Nophuhliso lomgaqo-isirashiya, akuvumelekanga ukuba kuphela malunga ne-sanctions, kodwa kanjalo malunga nezinye iindlela (umzekelo, imisebenzi ekhethekileyo).
Officially, ilahleko ukususela loo manyathelo eliqikelelwa $, billion.
Yintoni enika umdla: kwi-Russian Kubulungiseleli Kwezoqoqosho Nophuhliso baya kukholelwa ukuba, impembelelo yabo, sanctions ukusuka Ukraine uthathe indawo ngoko nangoko emva kokuba i-EU. Ubudlelwane phakathi phakathi ezimbini amazwe zithe forming kuba decades, kwaye izithintelo ukuba ingaba sele. imposed zithe obugorha ukuvuthuzela ukuba imeko kwi-Us. Kwaye nangona yokuba urhwebo kunye Kwakhona, nangona sanctions, uyaqhubeka.
I-Russia, OH Real Estate - Russia Amakhaya abo kuba Ziyathengiswa